नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : काठमाण्डौका नौ नाम ! : मनोज गजुरेल
काठमाण्डौका नौ नाम ! : मनोज गजुरेल
शान्त काठमाण्डौमा जब अब्यवस्थित बस्ती बढ्यो तब यो शहर हुलमाण्डौ बन्यो । बाटो घाटोजति सबै
राणाकालिन्, सवारी अनुमती गणतन्त्रकालिन भएपछि काठमाण्डौ हुलमाण्डौमा परिणत भयो । गाडीको हुल, मान्छेको हुल, छाडा गाईबस्तुको हुल, ठग्ने अधिकार माग्ने सवारीको हुल, लुट्ने सर्टिफिकेट खोज्ने ब्यापारीहरुको हुल । हुलहुज्जतलाई आफ्नौ नैसर्गिक अधिकार ठान्ने हुल्याहाहरुका नजरमा काठमाण्डौ हैन, हुलमाण्डौ हो ।
लौ न, यो शहरलाई पुन: सुन्दर काठमाण्डौ बनाउन के गर्ने होला ! - गजुरियल डट कम